I-kinetics yokufudumeza ngaphakathi ukuze kucinywe umphezulu wentsimbi
I-kinetics yokufudumeza ngaphakathi ukuze kucinywe umphezulu wentsimbi kuxhomekeka kwizinto: 1) ezithi zenze utshintsho kumandla ombane kunye nemagnethi yentsimbi njengesiphumo sobushushu obonyukayo (olu tshintsho lukhokelela kutshintsho kwinani lobushushu obufunyiweyo kubuniki obunikiweyo bentsimi yombane kwindawo yangoku yoqheliso) kunye, 2) kwizinto ezinoxanduva lokutshintsha kobungakanani bentsimi ye-electromagnetic ngexesha lokufudumeza (okt, utshintsho lwangoku kwi-inductor).
Ezi zinto zinxulumene notshintsho lweeparameter ze-inductors ngexesha lokufudumeza kwesinyithi kunye ukuya
izinto ezizodwa kuyilo olunikiweyo lwezixhobo ezinesantya esiphezulu, okt, nokuba amandla asetyenzisiweyo alawulwa ngexesha lenkqubo yokufudumeza. Kwiimeko ezininzi ubungakanani bentsimi ye-electromagnetic ye-inductor ayihlali ihleli ngexesha lokufudumeza, kwaye olu tshintsho luchaphazela ubume bexesha lobushushu bexesha.
Ukutshisa ukutshisa kunyango lobushushu lwamalungu eemoto laqala ukusetyenziswa kwisityalo sethu. Ngowe-1937-1938 umphezulu
Ukucima iintamo ze-ZIS-5 shaft shaft kuphuhliswe kumzi-mveliso wethu ngokusebenzisana nabasebenzi
elebhu yeVP Vologdin. Izixhobo zafakwa njengenxalenye yomgca oqhubekayo wemveliso, apho
izahlulo zixhomekeke kunyango ngoomatshini kwisixhobo esizenzekelayo esiphakamileyo sokuhamba rhoqo. Ngaphezulu kwe-61% ye
alt iinxalenye zeenjini ze ~ ae ZIL-164A kunye ne-ZIL-157K iimoto zilukhuni zomhlaba ngokufudumeza.
Ukucima umphezulu waMalungu oMatshini Emva Ukutshisa ukunyuka.
Ukufudumeza induction kusetyenziswa kakhulu kunyango lomphezulu wamalungu.
iindidi Teknoloji tags lokutshisa, ukufudumeza komhlaba, Induction Ukucima imbawula, Umatshini wokucima uqeqesho, Ukuchithwa komhlaba, Inkqubo yokucima induction, Ukucinywa komhlaba ukucima, Ukucima umphezulu, intsimbi yokucima umhlaba Post yokukhangela